तपाईंले जिउ पुछ्ने तौलिया कस्तो छ? - IAUA
ramkrishna October 24, 2017	तपाईंले जिउ पुछ्ने तौलिया कस्तो छ?
चिकित्सा क्षेत्रमा प्रचलित एउटा मान्यता ‘हाइजिन हाइपोथेसिस’ अनुसार सानो उमेरमा नै केही जीवाणू र केही निश्चित संक्रमण बालबालिकाले सामना गरे मात्र उनीहरूमा रोग प्रतिरोध क्षमता बलियो हुने र भविष्यमा सामान्यखालका संक्रमण सहजै पराजितगर्ने विश्वास गरिन्छ। यसो भन्दैमा गन्हाउने तौलिया कसैलाई पनि मन पर्दैन। खासगरी, त्यस्तो तौलिया जसको गन्धले नै जीवाणूको स्वर्ग भएको संकेत दिइरहेको हुन्छ।weeklynepal
Previous Previous post: हरेक एक किलो मोटोपनले मानिसको जीवनको दुई महिना आयु घट्ने !
Next Next post: यसकारण खानुपर्छ हरियो धनियाँ